Cunnooyinka Astringent - Talooyinka loogu talagalay Ragga Casriga ah | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, Caafimaadka
Cunto qaadasho Waa midka loo qaabeeyey si loo xakameeyo socodka xiidmaha iyo ujeedada laga leeyahay in lagu xakameeyo habka shubanka ama wanaajiyo tirada saxaro ee sareyso maalin kasta. Ujeeddadeedu waa in jidhku ku kasban karo laxan qunyar socod ah sababo kala duwan awgood sidaas awgeedna uu dib ugu soo ceshan karo nafaqooyinka qaarkood si aad u wanaagsan.
Haddii aad la kulantay nooc kasta oo khalad ah, guud ahaan gaas-mareenka caloosha ama nooc ka mid ah xanuunka caloosha, cuntada astringent lala xiriiri doono cuntooyin taxane ah oo kaa caawin doona helitaanka dheef-shiidka dheef-shiidka badan.
1 Cunto xumo iyo ujeedooyinkeeda
1.1 Cunnooyinka astringent ee lagula taliyay
1.2 Cunnooyinka laga fogaado Cunnooyinka Astringent
2 Talooyinka cuntada si loo qaabeeyo cunnooyinka cuncunka leh
Cunto xumo iyo ujeedooyinkeeda
Haddii aad isku aragtay nooc kasta oo shuban ah meesha dheefshiidkaaga ayaa saameyn ku yeeshay, nuugista nafaqada iyo dareerayaasha oo liita oo ay weheliso calool xanuun, qandho iyo jirro, hubaal waxay keenaysaa a nuugista liidata ee nafaqooyinka iyo biyaha.
Sababaha way kala duwanaan karaan, iyaga waxaa ka mid ah oo ay soo saareen fayraska, bakteeriyada, dulin ama qaadashada daawooyinka qaar. Xaaladaha kale waxaa lagu soo saari karaa sawirro degdeg ah Cudurada mindhicirka ee bararka.
Kiis kasta ha noqotee, haddii aad shuban qabto, waa inaad hubisaa cuntada aad cunayso calool fadhiga si dib loogu dhiso nidaamka dheef-shiidka si aanad u dhibsan yaraanta nafaqada, ama miisaan lumis.
Si ballaaran markaan uhadalno, waa cunno cunug ah waa inay ku jirtaa cunto caafimaad leh si wax ku ool ah oo haddii ay suurtagal tahay iska ilaali kuwa ay ku jiraan laaktoosku, kuwa hodanka ku ah faybar aan la milmi karin, kuwa jilicsan ama xanaaqa sida kuwa ay ku badan yihiin kafeega ama basbaaska leh.
Cunnooyinka astringent ee lagula taliyay
Cuntooyinkan ayaa lagula talin karaa nooca noocan ah inay awood u yeeshaan inay yeeshaan dheef-shiid adag oo aan lahayn dheef-shiid kiimikaad fudud, waa in si fudud loo kariyaa oo aan lagu darin xilli-xilliyeedyo.
Caanaha: yogurts bifid ayaa lagula talinayaa.
Baastada, bariiska iyo badarka: bariis cad, baastada caadiga ah, rootiga bangiga iyo buskud fudud.
Ukumaha: waxaa la doorbidaa in la kariyo, lagu qooyay biyo ama omelet laakiin leh saliid yar.
Carnes: Digaag, bakayle, turkey, hilib lo'aad, sinta hilibka doofaarka, iyo haddii ay suurtagal tahay hilib caato ah oo si fiican loo kariyey.
Kalluunka: ficil ahaan dhammaan kalluunka waa la oggol yahay, labadaba waa la kariyey ama la dubay.
Miraha: muuska bislaaday, miro guduud iyo pear ku jira sharoobada, tufaaxa la kariyey ama la dubay ee aan lahayn maqaarka, quince iyo casiirka aan saxarka lahayn
Khudaarta iyo digiraha: karootada, zucchini, baradho la kariyey, dhir, yaanyo, dabocase, bocor iyo maraq khudradda ah.
Cunnooyinka laga fogaado Cunnooyinka Astringent
Cunnooyinka aan faahfaahin doonno waa kuwa ay tahay in si gaar ah looga fogaado, maaddaama in badan oo ka mid ah ay ku jiraan faybar, waxaa ku jira hilib buunsheysan, waa digir ama cuntooyin ay ku jiraan dufan badan.
Cunnooyinka dufanka leh: subagga, majones, ama margarine.
Hilibka: guud ahaan kuwa ay ku jiraan dufan badan, kiiskan doofaarka ama wanka. Hilibka ugaarta ama hilibka xayawaanka ama guud ahaan goynta qabow, oo ay ku jiraan pâtés.
Kalluunka: kalluunka buluugga ah, kalluunka la cabbo, kalluunka qolofta leh ama kalluunka la shiilay.
Ukumaha: ukunta la shiilay laguma talinayo.
Macmacaanka iyo keega: buskud dhan hadhuudh, keega warshadaha iyo shukulaatada.
Caanaha: dhammaan caanaha iyo waxyaabaha ka soo baxa, oo ay ku jiraan yogurts oo ay ku jiraan miro iyo badar.
Cabitaannada: kuwa ay ku jiraan gaaska, kafeega, casiirka leh saxarka iyo cabitaanka aalkolada ah.
Kaarbohaydraytyo: rootiga miraha isku jira ama badarka.
Miraha iyo lowska: miraha fuuqbaxay, lowska iyo miro kasta marka laga reebo tufaax, quince ama moos bisil.
Talooyinka cuntada si loo qaabeeyo cunnooyinka cuncunka leh
Haddii aad bilowday inaad yeelato shuban daran oo aad ubaahantahay dib-u-soo-celin degdeg ah oo ku jirta jirka qoyaanka iyo elektrolytes, waxaad ku diyaarin kartaa qaaciddada soo socota: Hal litir oo biyo ah waxaan ku dari doonnaa casiirka seddex liin, 2 qaado oo sonkor ah, shaaha oo milix ah iyo nus qaado oo ah bicarbonate.
Talo ahaan, waxaa habboon in qorshe cayiman laga sameeyo dhammaan cuntooyinka la qaadan karo, taas oo ah, liis cayiman. Waa inaad sameysaa soo noqnoqda, oo cunno yar-yar maalintii. 5-6 jeer waxay noqon doontaa waxa saxda ah in la sameeyo si kor loogu qaado saxarada caadiga ah.
Waa inaad cuntaa cunto adigoon wax badan calalin, halkii ay jilicsanaayeen ama haddii ay suurtagal tahay la jajabiyey dheefshiidka si fudud. Heerkulkeeda haddii ay suurtagal tahay diirran, iyada oo aan ka badnayn heerkulka daran.
Waqtiga la karinayo cuntada waa inay ahaato la kariyey, la kariyey, la shiiday, la dubay, la dubay, foorno ama papillote, haa leh saliid yar intii suurto gal ah. Cunnooyinka shiilan ama rootiga lagu dubay ayaa ka careysiiya xuubka dheecaanka.
Waxaa jira qaado faleebooyin jilicsan Inta udhaxeysa cuntada si loo badalo dareeraha, chamomile, liinta iyo liinta verbena ayaa qumman. Biyaha liinta, biyaha bariiska, maraq khudradda ayaa sidoo kale aad u faa'iido badan.
Esidoo kale iska ilaali cuntooyinka hodanka ku ah faybaarka, khudaarta ceyriin, laakiin halkii la kariyey oo aan lahayn maqaarka, caanaha, cuntooyinka dufanka leh iyo maqaarka ama dufanka hilibka.
Waa inaad yareysaa cusbada iyo sonkorta iskuna day inaadan cabin nada ee khamriga. Kuwani waa dariiqooyinka dib loogu soo ceshan karo hawsha mindhicirka ee naga luntay maalmo gudahood haddii aan ilaalino laxanka wanaagsan iyo qaadashada mas'uuliyadda leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Cunto xumo
Yoga wuxuu u eg yahay lamaane
Sida loo kiciyo nin